Pamberi nemitero yakabatana nemusika wekutengesa | Ehupfumi Zvemari
Nguva yemitero yakabatana nemusika wekutengesa
Wese munhu anoziva kuti bhangi rekuti dhipoziti chigadzirwa chemari umo mutengi anoendesa huwandu hwemari kuchikwereti chenguva kwenguva yekuchinjana imwe chiyero chemubereko. Inosanganisirwa mukati meiyo mamodheru zvinoenderana nemari yakatarwa uye inozivikanwa zvakanyanya nekuti inovimbisa kuchengetedzwa kwevanonyorera, pamwe nekamwe purofiti panguva ino semhedzisiro yemutengo unodhura wemari. Neichi chikonzero, yako avhareji purofiti mugore rekupedzisira yaive 0,10% munguva dzisingasviki mwedzi gumi nembiri. Nekusagutsikana kunotevera pane chikamu cheavo vanoisa mari.
Asi izvo vamwe vashoma uye vepakati varimimari vasingazive ndeyekuti term dhipoziti inogona kusungirirwa kumusika wemusika kuti uvandudze epakati pemipendero. Asi zvinongoerekana zvaitika, kana zvirinani kuitira kuti vave nechikumbiro chakakura pakati pevashandisi vebhangi. Uye zvakare, iri zano rinogona kuitwa pamwe nekuchengetedzeka kumwe chete kana nedengu remasheya kana kunyangwe rakabatana neakanyanya indices munyika. Semuenzaniso, iyo Dow Jones, FTSE 100 kana iyo yakafanana Eurostoxx 50. Iko hakuna zviriko zvirambidzo mune izvi. Chinhu chakaomesesa ndechekuti dzinotengeswa nemabhangi pachawo.
Kubva pane ino maonero, mashandiro anopiwa neichi chigadzirwa chekuchengetedza chakatosiyana neicho chemari yakachengetwa. Uye saka zviri nyore kwazvo kuti iwe uzvizive kuitira mune mashoma anotevera iwe unonzwa uchiedzwa kutsvaga chero cheichi zvigadzirwa. Nekuti iwe unofanirwa kuziva kuti izwi bhangi dhipoziti rakabatana neiyo bhegi ramba uchichengetedza nguva yekusingaperi iyo inogona kuve ye 24, 30, 40 kana kunyange yakawanda mwedzi. Chero zvazvingaitika, izvo zvausingazomboone kumisikidzwa kweaya maitiro mune pfupi pfupi mazwi. Hongu kwete nekuti hazvigoneke nekuda kwehunhu hwayo.
1 Mitero, yakabatana nemusika wekutengesa?
2 Ndezvipi zvavanofarira zvavanogona kupa?
3 Inosungwa chete mumatanda here?
4 Zvinodiwa kuti uwane
5 Zvinobatsira here kuvahaya?
Mitero, yakabatana nemusika wekutengesa?
Kuvapo kweichi chinoshamisa chinongedzo kuri kukonzerwa ne kunatsiridza purofiti zvaro. Zvakasarudzika uye zvakasarudzika nekuti kune rimwe divi dhizaini yavo inoramba yakafanana, ini ndinosiya misiyano yatiri kuzokuratidza kubva zvino zvichienda mberi. Chinhu chinozvisarudzira kuva ichi inyaya yekuti musika wemasheya wave chigadzirwa chakakurumbira pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Iko kunenge vese zvavo vachiziva mashandiro avo uye kuti masheya anotengwa nekutengeswa sei mumisika yemari. Iyi poindi inofarira dhizaini yemamodheru inoitirwa kuchengetedza uye nekupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi.
Kune rimwe divi, bhangi izwi dhipoziti uye ayo akabatanidzwa kune equity misika garandi nguva dzese zvipo zvehupfumi zvevatengi. Ichokwadi kuti akajairika mabhangi emadhipoiti ndeaya emari yakatarwa. Kupi purofiti yacho inoramba isina kuchinja kusvika kumagumo kwetemu dhipoziti. Mune izvo zvakabatanidzwa kumisika yemari, izvozvi zvinoteedzana zvinotevera, zvichisimbisa kuderera kushoma. T zvakare nezwi rakambotsanangurwa rekugara nekusingaperi uye kuti mune zvese zviitiko zvinofanirwa kucherechedzwa. Asi nemusiyano unonzwisisika uyo iyo mubereko unogona kuwedzera kana iyo yemari nhumbi iyo dhipoziti yakabatana ichizadzisa zvinangwa zvayo mumutengo wayo.
Ndezvipi zvavanofarira zvavanogona kupa?
Mumwe wemibvunzo inozvibvunzwa nevasevha ibhenefiti iyo ivo yavanogona kuwana kubva mukubatira aya mamodheru ekuchengetedza Zvakanaka, chichava chakanangana nebasa reiyo kukosha kwezvikamu, indices kana misika yemasheya yakabatanidzwa mukuita. Asi nekapu yepamusoro isinganyanyi kudarika 5%. Poro sekureba sekunge mamiriro eiyi link asangana mubhangi dhipoziti. Kana zvisina kudaro, anoisa mari haazorasikirwa neeuro imwe yemipiro yavo yemari. Mari yemubereko yakabvumiranwa nebhangi ichaenda kuakaundi yako yekutarisa.
Kune rimwe divi, pane chinhu chinofanirwa kuzadzikiswa pasi pechero mamiriro ezvinhu uye ndiyo nguva yekumisikidzwa kubhangi. Kunyangwe kanzura kare mushandisi haazove nesarudzo kunze kwekutarisana nechirango chekusimudzira kwesangano iri. Ichi chinhu chinogona kuodza moyo vanhu vanofarira kuhaya ichi chigadzirwa kuchengetedza. Hazvishamise kuti ndeimwe yemakakatanwa makuru zvine chekuita nerimwe boka remari yekubhangi. Kunze kwekumwe kufunga kwekuita nekushanda kwayo uye izvo zvinogona kutungamira kune kumwe kukakavara maererano nekugadzwa kwayo.
Inosungwa chete mumatanda here?
Hongu kwete nekuti yakavhurika kune mamwe emari midziyo kubva kumusika wemasheya, sezvatakambotaura kare. Nenzira iyi, anoisa mari ane mukana wakakura wekuti anogona kusarudza chigadzirwa chinokodzera chimiro chake chesaver. Kunyangwe chiri chokwadi zvakare kuti izvo zvinopihwa hazvina kuwanda panguva ino. Kana zvisiri, pane kudaro, ivo vanogumira kune akateedzana mafomati ekutanga. Sezvinei, hapana hukuru hwakawanda mukirasi ino yezvigadzirwa zvebhengi. Kunyangwe chokwadi chekuti iri modhi yakaiswa kwemakore mazhinji muzvipo uye kukwidziridzwa nemasangano echikwereti.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvakanyanya zvine chekuita neiyi nhanho yekubatana ndiyo inoenderana neiyo kwenzvimbo zvaro. Sezvo ivo zvakare akavhurika kumisika yepasi rose yemari, uko zvikumbiro kubva kukondinendi yekare zvinokunda. Kubva pane maonero aya, hapana mubvunzo kuti zvinokwanisika kuisa mari mumusika wemari pasina chikonzero chekubatanidzwa mukutenga nekutengesa zvikamu pamusika wekutengesa. Pasina kufunga, hongu, njodzi dzekushanda kwekupedzisira. Senzira yekudzivirira kuvepo mumisika yemari.
Zvinodiwa kuti uwane
Mune chero zviitiko zvacho, kondirakiti kuiswa kweaya maitiro haidi kushanda zvakanyanya yevaponesi. Kana zvisiri izvo zvinopesana, nekuti ivo vanochengetedza zvakafanana zvivakwa zvemamwe echinyakare kana akajairika mabhangi akachengetwa. Kubva pane idzi nzira dzakajairika, zvinofanirwa kusimbiswa kuti iyi kirasi yezvigadzirwa zviri nyore kwazvo kubvumirana kune ese profiles evashandisi vebhangi. Zvakanaka, tinokuratidza zvaunofanirwa kuita kubva ikozvino kuti unyore chero cheizvi zvigadzirwa zvebhangi:
Iva mutengi wesangano rinotengesa nguva yekubhangi dhipoziti uye kune iyo a checking account kuita mhosva dzekuvhiya.
Iva ne huwandu hwakakosha hwehupfumi kutarisana neichi chiitiko uye kune iyo mhosva yemakomisheni anogona kuitika ayo yaanosanganisira muzvikamu zvayo zvechibvumirano zvinofanirwa kuwedzerwa.
Uye pakupedzisira, kuva zera sezvazviri mune zvakawanda zvezvinhu zvakakosha kubhengi zvigadzirwa.
Kana iwe ukasangana nezvose izvi zviri nyore zvinodiwa, usakahadzika kuti iwe uchave uzere zvakakwana kusaina kondirakiti yemamodeli ekuchengetedza. Beyond mamwe ma technical mamiriro ayo ayo maratidziro ayo anogona kugadzira. Iwe unenge wave wakasimbisa kuti iwe hauzove nematambudziko mazhinji ekuita iyo kuchengetedza kunobatsira kuburikidza nezwi rekuisa. Hazvishamisi kuti ndeimwe yemabhenefiti anopihwa neiyi yekuchengetedza modhi inowanzoitika mumabhangi zvinopihwa.
Zvinobatsira here kuvahaya?
Chero zvazvingaitika, zvichave zvakafanira kuti iwe utarise kubva ikozvino zvichienda mberi kana zvichizobatsira kukanda iri rakakosha kirasi mune term dhipoziti. Nekuti kune rimwe divi, pasina mubvunzo uchave nesarudzo kugadzirisa kuita zvetsika kuti izvi zvigadzirwa zvebhangi zvinokugadzirira iwe. Chero zvazviri, iwe uchave uine chokwadi chekuti iwe unowana yakagadziriswa kudzoka zvisinei nezvinoitika mumisika yemari. Iyo yekuwedzera poindi yemasevha profiles ane akadzivirirwa akacheka uye ayo anogona kurerekera yako sarudzo kukuvadza mamwe akaomarara kana ane hukasha mafomati.
Uye kune rimwe divi, iwe hauzove nekudzokororwa kwese kunogona kuwanikwa mumisika yemari. Kana zvisiri zvishoma chete zvine chekuita nekukwira uko iyo dengu yezvikamu yakabatana kune yakanyoreswa mutero inogona kusangana. Muchirevo chechinyorwa chino, kana izvo zvaunoda iri purofiti hombe, hongu iwe hausi kutarisa kune chaunoda chigadzirwa. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti haungambopfuure mabhenefiti uye izvo zvinowanzo kuvepo pamatanho matatu%. Nekuti kana izvo zvaunoda kuisa mari yako mumusika wemasheya zviri nani kuti uende wakananga kutenga nekutengesa masheya mumisika yemari.
Chimwe chinhu chaunofanirwa kuongorora kuti uzive kana kunyoreswa kwemadhipatimendi aya kuri kubatsira kana uchigona kushandisa nguva yakawandisa nemari yakadyarwa. Hazvishamisi kuti mazwi avo ekusingaperi akakwirira zvakanyanya, kunyanya kana achienzaniswa nemamwe madhipatimendi akajairika emabhangi. Nekuti zvinogona kusabhadhara iwe kuti uite maitirwo aya kwenguva refu zvakadaro mukureba kwavo. Kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi kwauchazofanira kuongorora kubva panguva dzino chaidzo. Nekuti mari zhinji iri panjodzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Nguva yemitero yakabatana nemusika wekutengesa
Tech masheya anotyisa vatyairi